Lampard oo hal arrin ka codsaday ciyaartooyda Chelsea, kaddib barbarihii ay la galeen kooxda Leicester City – hareerley News
Tababaraha kooxda kubadda cagta Chelsea ee Frank Lampard ayaa hal arrin ka codsaday ciyaartoydiisa, kaddib kulankii ay caawa barbaraha la galeen kooxda Leicester City, taasoo ah iney yeeshaan shaqsiyad dheeri ah.
Kooxaha Chelsea iyo Leicester City ayaa ku kala baxay barbaro 1-1 ah kulankooda labaad ay ku wada ciyareen horyaalka Premier League xili ciyaareedkan cusub ee 2019/2020.
Frank Lampard oo ciyaarta kaddib la hadlayay saxaafada ayaa wuxuu ka codsaday xiddigahiisa iney yeeshaan shaqsiyad dheeri ah wuxuuna yiri:
“Runtii waxay aheyd biloow fiican, waxaan ku hogaamin karnay ciyaarta 2 ama 3 gool”.
“Waxaan aheyn kuwa deg deg ah isla markaana firfircoon, kaddib waxaan u ogolaanay Leicester City inay ciyaarta ku soo laabtaan”.
“Qeybtii labaad, kuma aanan faraxsaneyn, sababtoo ah waxaan iyaga u ogolaanay fursado badan ee dhanka weerarka ah”.
“Waxaan kaliya eegi karnaa nafteena, dhamaan kulamada aan ciyaareyno, waan ku faraxsanahay kubad heysashadeena, laakiin ma aanan haysanin fursado nagu filan si aan u dhaqaajino kubadda”.
“Waa inaan heysanaa shaqsiyad dheeri ah, waxaan taasi ku aragnay bartamihii isbuuca, laakiin maanta ma helin”.
Madaxweyne Farmaajo oo Maanta la kulmaya dhigiisa Jabuuti